Abantu abathetha isiXhosa njengolwimi lwenkobe.
AmaXhosa (isiNgesi: Xhosa people) — AmaXhosa liqela labantu baseMzantsi Afrika elifumaneka eMpuma Koloni . Aba ngabantu abathanda amasiko abo kakhulu kwaye bohlulwe ngokweziduko (Clan names) kunye neengingqi ezininzi . Ezona ziduko abohlulwe ngazo ngamaGcaleka , amaRharhabe , imiDange kunye namaNdlambe . Kukho nezinye izidukho ezifumaneka kumaXhosa ezo ngabaThembu , amaBhaca , abakoBhosha , kunye namaQwathi nabo basebenzisa isiXhosa .
Igama elithi isiXhosa okanye igama lamaXhosa lithathwe kwinkosi enkulu yokuqala yamaXhosa eyayibizwa ngokuba nguXhosa. Yona eligama yaliphiwa ngabaThwa ababesaziwa njengabantu bokuqala . Ngokolwimi labaThwa eligama lithetha ubungqongqo kunye nokucaphuka . Emva kokuthiywa kwenkosi uXhosa kwatsho kwakho iqela labantu elibizwa ngamaXhosa kwaye elithetha isiXhosa.
AmaXhosa aphuma eTranskei kunye naseCiskei . Amanye ohlukene kubantu bakwaNguni kuqhushululu olwaye lwadaleka olubizwa ngokuba yiMfecane . Nabo abo bantu babohlukene kwanguni ikwangamaXhosa kodwa isiXhosa abasithethi ngendlela efanelekileyo kwaye babiza iziduko ezohluka-hlukeneyo umzekelo : amaMfengu , amaBhele kunye namaZizi .
Aba bantu babizwa ngamaXhosa baneenkolo kunye namasiko . Basebenzisa amabali ukuze asombulule iingxaki zawo. Akholelwa kuThixo kodwa ngokwesiXhosa nguQamata . Ngokwesiko lawo izinyanya zawo ezingooyise mkhulu ababhubhayo zisebenza ukukhusela kwaye zincedisana no Qamata ukuze amaXhosa akwazi ukuphila . Amaphupha adlala eyona ndima inkulu ukuze umXhosa adibane nezinyanya zakhe
Aneenkosi zawo ezinkulu zokuqala . UXhosa yayiyinkosi yokuqala equlethe imvelaphi nentsusa yegama lamaXhosa . Yena unkosi uXhosa waye walandelwa ngunkosi uPhalo owaye walizwa ngoonyana ababini ababebizwa ngokuba nguGcaleka kaPhalo kunye noRharhabe kaPhalo owayesiza emva koGcaleka . Ezo yaphela izezinye iinkosi zakwaXhosa . AmaXhosa aye ohlulwa ngokobukhosi phantsi kooGcaleka kunye nooRharhabe kwaye zikhona nezinye inkosi ezilandela emva kwabo .
Last edited on 7 Eyo Msintsi 2020, at 19:48
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-7 Eyo Msintsi 2020, kwi-19:48